अनुत्तरित प्रश्न- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २३, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — निर्मल पन्तको बलात्कार र हत्याका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले किन लुकाइयो यी प्रश्नका जवाफ ?
-किरणले १० साउनमा आफ्नो जन्मदिन भनेर ठगे ? उनकी दिदी पार्वतीले किन जन्मदिन शुभकामना ट्याग गरिन् ?
- साजन र किरण त्यो रात किन सँगै थिए ? उनीहरूसँग अरू कोको थिए ?
- एसपी डिल्लीराज विष्टको त्यस दिनको कल डिटेल किन हेरिएन ?
-सइ डिकरदेव पन्त साउन १० गते राति कहाँ थिए ? शव पाइएको ठाउँमा उनी किन आफैं गए ? १० साउनको उनको कल डिटेल किन हेरिएन ? के सम्बन्ध थियो डिकर र किरणको ?
-अम्बाको रुख काट्नुको अर्थ के हो ? त्यो रुखको दाउरा कहाँ छ ?
-किताबै भिजेको छैन तर प्रहरी अधिकारी त्यही ठाउँमा बलात्कार र हत्या हो भनिरहेका छन् । किन ?
-शिशिर ठगुन्ना र ऐश्वर्या विष्टको बयान खोई ?
-सीसीटभिी क्यामेरा (ओपरा र बजारको) बारे किन बोलिएन ?
-बम परिवारले विष्ट बाबुछोरालाई नचिनेको हावादारी गफ किन पत्याइयो ?
-भजाइनल स्वाबमा वीर्य नपाइएको हो भने किन दिलिप, डिल्ली, किरण र आयुषको डीएनए मिलेन भनियो ?
-प्रहरीले यति ठूलो गल्ती गर्दासमेत किन फौजदारी अभियोग सिफारिस नगरी विभागीय कारबाही मात्रै सिफारिस गरियो ?
-अंगुर जिसीले किन कुकुर परिचालन गरेनन् ? खोलापारि सम्भव नभए पनि नभिजेका किताबबाट कुकुर परिचालन गर्न सकिने थियो । किन गरिएन ?
-अम्बालाई प्रमाणमा सामेल नगर्नु र अम्बाको रुख काटिनु संयोग मात्रै हो र ?
-खल्ती नै नभएको सुरुवालको खल्तीबाट दिलिपले २० रुपैयाँ झिकेको भन्दै सुनाएको कहानीको रचयिता को थिए ? किन सोधिएन त्यो कहानी घोक्न लगाउनेका बारेमा दिलिपलाई ?
– खेम भण्डारी (फेसबुकबाट)
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ १०:००
२ महिनामा १० करोड राजस्व
धनगढी — प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा १० करोड राजस्व संकलन गरेको छ  । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजस्व संकलनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन्  ।
संकलित राजस्वमध्ये सवारीसाधन करबापत् ४ करोड २५ लाख ६३ हजार, घरजग्गा दर्ता करबापत् ५ करोड ४ लाख २५ हजार ७ सय र दण्ड–जरिवाना तथा जफत करबापत् ४७ लाख ७६ हजार संकलन गरिएको हो । कृषि आय, मनोरञ्जन र अन्य प्रशासनिकलगायत कर स्थानीय तहहरूले संकलन गरिरहेको भए पनि पूरै विवरण प्राप्त नभएको मन्त्री बोहराले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब ६ करोड ५६ करोड राजस्वको अनुमान गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ९४ दशमलल ८३ प्रतिशत राजस्वको अनुमान संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानमा आधारित रहेको मन्त्री बोहराले बताए । केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने रकम २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख हो । कुल बजेटको ५ दशमलव १७ प्रतिशतमात्रै प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारबाट संकलन हुने अनुमान गरेको थियो ।
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०९:४६